Andro: 6 Novambra 2019
KARDEMİR dia nahavita ny fananganana 5 ary asa fametrahana mekanika mandritra ny volana 4. Ny fampiasam-bolan'ny milina Casting mitohy dia nampidirina tamin'ny lanonana iray. KARDEMİR Mitohy ny famotsiam-pahefana hahatratra ny 3,5 tapitrisa taonina [More ...]
KARDEMİR Nahazo Loka voalohany amin'ny Famokarana maharitra
Nandritra ny 2019 Productivity Project Awards nokarakarain'ny Ministeran'ny Indostria sy ny Teknolojia mba hanohanana ny fandinihana ny fahombiazan'ny orinasa mikendry ny hampitombo ny fifaninanana eo amin'ny firenentsika ary handrisihana ireo tetikasa tanterahana amin'ity sehatra ity dia nahazo i KARDEMİR " [More ...]
Vahaolana vaovao sy namana mifankatia indrindra amin'ny fiarovana malalaka eo amin'ny sehatra malalaka
Ny fiarovana ny tontolo iainana dia manjary zava-dehibe toy ny filana fiarovana ny trano fonenana, trano ary trano indostrialy, toerana fananganana ary tobim-pilalaovana. Fefy sisintany miaro ny tontolo iainana, izay mety miovaova arakaraka ny faritra fampiasana, ambanin'ny tany [More ...]
Ny serivisy fitateranaPark T HRSİD
TransportationPark nampiantrano an'i TÜRSİD; Ny fivoriana 15 ny Railway sy ny Komisim-paritry ny Fikambanan'ny Fikambanan'ny Rafitra rehetra (TÜRSİD) dia nampiantranoin'ny Ulasim Park A.Ş., orinasaan'ny Kocaeli Metropolitan Municipality. Tiorkia tanteraka 9 avy amin'ny faritany isan-karazany [More ...]
Imamoglu, ny fitateram-bahoaka amin'ny fitateram-bahoaka 'tsy hanome fotoana'
Ny filohan'ny monisipaly Metropolitan Istanbul Ekrem Imamoglu, Kabatas-Mahmutbey Metro Line vita ny fanamboarana ny tonelina, hoy ny lozam-pifamoivoizana ao Besiktas. Imamoglu, ny fiara fitateram-bahoaka 'Monopoliam-bahoaka dia tsy hanaiky ny fotoana' hoy izy. Imamoglu, ny andro farany amin'ny Istanbulite [More ...]
Ny Ben'ny tanàna İmamoğlu dia nanambara ny daty fanokafana ny Kabataş Mahmutbey Metro Line
Ny Ben'ny tanàna İmamoğlu dia nanambara ny datin'ny fanokafana ny Kabataş Mahmutbey Metro Line; Ny filohan'ny İBB Ekrem İmamoğlu dia niresaka nandritra ny lanonana nahavitan'ny tsipika 19 kilometatra lava-kilometatra Kabataş-Mahmutbey Metro Line. 24,5 bin amin'ny lafiny iray [More ...]
Manan-tantara ao amin'ny Bosporus ara-tantara ny Paşabahçe Ferry
Ny Paşabahçe Ferry manan-tantara, izay miandry ny andro ho mpanjaza eny amoron-tsirak'i Beykoz, dia hihaona amin'ny Bosporus indray miaraka amin'ny fandraisana andraikitra IMM. 10 Ny sambo izay naterina tao amin'ny Kaominin'i Beykoz avy ao amin'ny Istanbul Metropolitan Munisipaly dia naverina avy amin'i byehir Hatları A.Ş. [More ...]
Voalaza tao amin'ny gara Ankara i Ankara
Tany Amin'ny gara Ankara i Haara; Ny fiaran-dalamby voalohany izay hiainga avy any Chine ary handeha ho any Eropa amin'ny alàlan'ny fampiasana Marmaray, dia nalefa tany amin'ny Station Railara Express Ankara, niaraka tamin'ny lanonana. Minisitry ny Turhan, Minisitry ny varotra Ruhsar Pekcan [More ...]
China Express Railway dia manome torolàlana vaovao amin'ny fitaterana an-tsambo
China Express Railway dia manome torolàlana vaovao amin'ny fitaterana an-tsambo; China Railway Express, fiaran-dalamby voalohany nandeha an-tongotra tany Chine ka nankany Eropa tamin'ny fampiasana Marmaray, 06 Novambra 2019, Fiaran-dalamby ao Ankara [More ...]
Mihoatra eny amin'ny Irmak Zonguldak Line Km: 378 + 220. Ny fetin'ny serivisy momba ny fividianana eo amin'ny faritra (TCDD) dia manome fetra 2 / 2019 GCC 496707 TL ary eo ho eo ny vidiny 8.962.794,07 TL [More ...]
KARDEMİR Toeram-pamokarana kodiarana an-trano sy fiarovam-pirenena amin'ny kodiarana
KARDEMİR Nanomboka famokarana kodiaran-dalamby an-trano sy nasionaly; Kardemir dia nanomboka ny famokarana faobe sy ny fandefasana ny kodiaran-dalamby amin'ny fiaran-dalamby ao BA318. BA004 karazana kodiarana lamasinina amin'ny famokarana [More ...]
fangatahana dia tsy firenena maro eto amin'izao tontolo izao dia manomboka ao Torkia! Ho fanampin'ny mpandeha izay misy fihetsiketsehana voafetra eo amin'ny seranam-piaramanidina misy anay; omena laharam-pahamehana ho an'ny zazakely, ireo mpandeha bevohoka ary marary izay mila fidirana haingana! Fanjakana Airports Authority [More ...]
Fandalinana fifamoivoizana an-tsokosoko any Alanya; Ny ekipan'ny mpiasan'ny sampana Serasera Alanya Service Alanya dia nametraka sonia 102 tondrozotra amin'ny marika samihafa any amin'ny manodidina an'i 700 any Alanya. Antalya Metropolitan munisipalin'ny Alanya Service Unit [More ...]
Fiofanana mifehy ny hatezerana ho an'ireo mpamily sy mpampiantrano vehivavy eto Antalya
Fanaraha-maso ny hatezerana sy fampiofanana ara-pifandraisana mety ho an'ny mpamily any Antalya; Ny Antalya Metropolitan Munisipaly dia manohy ny fiofanana arak'asa. Ny fifehezana am-pahatezerana an'ny Departemantan'ny asa sosialy ho an'ny mpamily sy ny tranom-bahiny manompo an'olon-tsotra [More ...]
Notanterahina ny karatra fiakaran'ny taonan'ny karatra famandrihana mpianatra ao Ankara
Ny fitsipiky ny taonan'ny taona dia nakarina tamin'ny karatra famandrihana mpianatra tao Ankara; Miaraka amin'ny fampanantenan'ny Ben'ny tanàna ao Ankara Metropolitan Mansur Yavaş, izay nanohy ny fanomezana ny teti-bolan'ny mpianatra, dia famandrihana isam-bolana fihenam-bidy no natolotra voalohany teto Ankara. [More ...]
Ny fizarana mpiasa 703 personnel ho an'ny DHMI sy TCDD Nambara; Ny talen'ny jeneraly an'ny masoivohom-piaramanidina ho an'ny seranam-piaramanidina (TCDD) sy ny mpiasan'ny mpiasam-panjakana dia nosokafana ary nambara ny fitsinjarana ireo gadra. Tale jeneralin'ny Ivotoerana an'ny seranam-piaramanidina [More ...]
TCDD personnel Quit in 2009 Taona nanapa-kevitra; Ny Fitsarana momba ny lalàmpanorenana dia nanitsakitsaka ny zon'ny sazy fifehezana napetraky ny mpiasan'ny TCDD izay miala amin'ny asany ao amin'ny 2009, ankoatra ny miala amin'ny asany. [More ...]
Nianjera ny tetezan'i Kadikoy Ibrahimaga! Làlana 5 Moon Pedestrian; Manomboka ny asan'ny fanapotehana ao amin'ny faritra nohavaozina ny tetezana Ibrahimaga ao Kadikoy ny Kaomin Metropolitan Istanbul. Ny fanamboarana ny tetezana Ibrahimaga dia afaka volana maromaro amin'ny 5. İstanbul Kadıköy distrika [More ...]
Fampivoarana tselatra! Istanbul Marmaray Mpitantana ny faritra dia nesorina; Araka ny fanapahan-kevitra navoaka tamin'ny fanendrena ny fanaovan-tsonia ny Filohan'ny Torkia, Recep Tayyip Erdogan, dia nalaina avy amin'ny Marmaray-paritra Manager Mehmet Ziya Erdem asa. Ny Filoha Tiorkia Recep [More ...]
Ny mpiantoka mpandeha amin'ny tetik'asa BOT natokana ampahibemaso nataon'ny dolara 65 tapitrisa; Ny Tale jeneralin'ny National Airports Authority (DHMI) dia nilaza tamina fanambarana iray hananganana tetik'asa famindram-pahefana noho ny fatiantoka nataon'ny mpandeha nanome antoka 65 tapitrisa dolara [More ...]